ပြီးခဲ့သည့်သောကြာနေ့, ဥရောပဗဟိုဘဏ် (ဥရောပဗဟိုဘဏ်) ဖုံးအုပ်ထားသည့်ပထမဦးဆုံးလက်ငင်းငွေပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှုအကြံပြုချက်များစတင် 19 ယူရိုဇုန်အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်များ, နှင့်ဤဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူဥရောပတိုက်တွင်မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုအတွက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာရန်မျှော်လင့်, နှင့်အမေရိကန်နှင့်အာရှအများအပြားနည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးများနှင့်အတူ. ဒီစျေးကွက်အတွက် Fight. ဤသည်အကြံပြုချက်များ-enabled လက်ငင်းငွေပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှုကျယ်ပြန့်သည့်ယူရိုဇုန်တစ်လျှောက်လုံးရာထူးတိုးခံရလိမျ့မညျ, လာသောအခါအီးယူအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ’ သူတို့ကအတိတ်ကာလတိုအဖြစ်စားသုံးသူနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစားကွန်ယက်ကိုလွှဲပြောင်းမှတဆင့် delay လုပ်ခြင်းပဲစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းမိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုအရောင်းအဖြည့်စွက်ပါလိမ့်မယ်. ငွေပေးချေမှု၏ဖြစ်ရပ်ဆန်း.
အကြံပြုချက်များတိုက်ကြီးအနှံ့ဖောက်သည်ယူရိုအတွက်အနိမ့်ကြေးလက်ငင်းအခြေချနေထိုင်ကမ်းလှမ်းရန်ရည်ရွယ်ထား. ယူရိုဇုန်ဘဏ်ဖောက်သည်များအကြံပြုချက်များကိုရယူနိုင်ပါလိမ့်မည် 24 နာရီလွယ်ကူပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသောငွေပေးချေမှုကိုခံစားဖို့တစ်ရက် - Venmo အလားတူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ.
အကြံပြုချက်များ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် စျေးကွက်သစ်အခြေခံအဆောက်အအုံဝန်ဆောင်မှု ဥရောပဗဟိုဘဏ်ယခုလစတင်ကြောင်း. ဒါဟာသူတို့ရဲ့ဖောက်သည်ကိုမှန်ကန်အချိန်အတွက်ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းရန်ဖြစ်နိုင်ခြေပူဇော်ဖို့ငွေပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပါတယ်နှင့်နာရီဝန်းကျင်, ယခုနှစ်နေ့တိုင်း. ဤသည်အကြံပြုချက်များကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုလိုတယ်, တစ်ဦးချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများစက္ကန့်အတွင်းတစ်ဦးချင်းစီကတခြားအကြားငွေလွှဲနိုင်ပါလိမ့်မည်, မသက်ဆိုင်ဘဲမူလ၎င်းတို့၏ဒေသဆိုင်ရာဘဏ်များ၏မဖွင့်နာရီ.
အကြံပြုချက်များ TARGET2 တစ်ခု extension ကိုအဖြစ်တီထွင်နေသည်နှင့်ဗဟိုဘဏ်ကပိုက်ဆံအတွက်ငွေပေးချေမှုအခြေချလိမ့်မယ်. သူတို့ကအစအဦးမှာကပြောသည်သော်လည်း, အကြံပြုချက်များသာသောဝါကျရှိခဲ့သည်ယူရိုအတွက်ငွေပေးချေမှုလွှဲပြောင်းအခြေချလိမ့်မယ်, ဝယ်လိုအား၏အမှု၌, သည်အခြားငွေကြေးအဖြစ်ကောင်းစွာထောက်ခံနိုင်.
စနစ်၏အကျိုးကျေးဇူးများအချို့သည်ငွေလွှဲပြောင်းမှုဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာအဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးချောင်းမြောင်းပါဝငျမညျနှင့်လက်ငင်းငွေပေးချေမှုစနစ်အား ပတ်သက်. အံ့သြစရာတကယ်တော့ဒါဟာအားလုံးအချိန်ကိုငွေကြေးသည့်အချိန်တွင်မဆိုဘဏ်ထဲမှာအခြေချခံရဖို့ခွင့်ပြုသောသူအပေါင်းတို့သည်လက်လှမ်းစနစ်.
စွပ်စွဲချက် ဂယက်ထ မိတ်ဖက်များနှင့်ပန်ဥရောပအခြေခံအဆောက်အအုံ, ယခုတစ်ဖွဲ့လုံးကနယ်စပ်ကိုဖြတ်ပြီးဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုက်ဆံ၏ဂီယာအားဖွင့်အခြေချနေထိုင်၏အပြောင်းအရွှေ့ကိုထိန်းညှိရန်ချန်နယ်အဖြစ်ဗဟိုဘဏ်ကသုံးပြီးအားလုံးဥရောပကျော်တစ်ချက်ချင်းငွေပေးချေမှုစနစ်ကဖန်တီးမူလတန်းရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူတိုက်ရိုက် သွား. ဥရောပလက်ငင်းငွေပေးချေအခြေချပစ်မှတ်ထား. နှင့် '' လက်ငင်းငွေပေးချေအခြေချ '' ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းအတိုင်းဝန်ဆောင်မှုတွဲနေသည်, မျိုးစုံအမည်မသိသတင်းရင်းမြစ်သူတို့ဂယက်ထ blockchain လှည့်ပြီဟုဖော်ပြခဲ့သည်ပါပြီ.
တချို့က crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်အဆုံး၏အစအဦးအဖြစ်ဤတွေ့မြင်: ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းများ crypto ကအန္တရာယ်စိန်ခေါ်မှုများကိုတုံ့ပြန်ရန်နှင့်အရေးယူမှစတင်နေကြသည်. အခြားသူများက, သို့သော်, အဖြစ်မြင် crypto များအတွက်ကတိပေး.
အရာတခုကတော့သေချာဖြစ်ပါသည်. ဤသည်ဆက်ဆက် cryptocurrencies နှင့်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးအတှကျအကောင်းတစ်ဦးအရာဖြစ်၏. တကယ်တော့, အကြံပြုချက်များ xCurrent တူသောဂယက်ထနည်းပညာများအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဆိုင်းဘုတ်များရှိပါတယ်ကြောင့်ဂယက်ရဲ့အမျိုးမျိုးသောငွေပေးချေမှုနည်းပညာများများအတွက်ဂိမ်း-changer ဖြစ်နိုင်ပါတယ်, xVia, နှင့်အနာဂတ်တွင် xRapid.
ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုဂယက်ထနေဖြင့်စွမ်းအင်သုံးနေကြတယ်, တတိယက powered နေစဉ် XRP ဒစ်ဂျစ်တယ်လက္ခဏာသက်သေ. အကြံပြုချက်များစျေးပေါအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေပေးချေမှုလွယ်ကူချောမွေ့ဤနည်းပညာများအချို့သို့မဟုတ်အားလုံးကိုအသုံးချမည်ကိုဖြစ်နိုင်သမျှဒါဟာင်. အဆိုပါအကြောင်းပြချက်ဂယက်နှင့်အတူပူးပေါင်းထားပြီးဖြစ်ပါသည် TAS Group မှ ဥရောပအတွက်ဘဏ်များနှင့်အတူအများအပြားအရေးကြီးသောမိတ်ဖက်ရှိပါတယ်.
သူတို့ရဲ့ဘဏ် Liquid စီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်း၎င်း၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုအထူးအကြံပြုချက်များငွေပေးချေမှုစံနှုန်းတွေနဲ့အများဆုံးအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါပူဇော်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်. ဘဏ်များချောမွေ့စွာအသစ်ကအကြံပြုချက်များပေးချေမှု protocol ကိုမှပြောင်းလဲမှ TAS Group ၏ဘဏ် Liquid စီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းကိုသုံးနိုင်သည်.
အဘယ်ကြောင့် Crypto မှအလားတူအကြံပြုချက်များ Is?
အကြံပြုချက်များဂယက်ရဲ့ xCurrent တူသောငွေပေးချေမှုပလက်ဖောင်းမှအလားတူလမ်းအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်. အကြံပြုချက်များနှင့်အတူ, ငွေပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှုပေးသူတို့ရဲ့နိုင်ငံ၏အလယ်ပိုင်းဘဏ်ထဲမှာငွေဖြစ်လွယ်၏အဘို့ကိုဘေးဖယ်ထားရန်လိုအပ်သည်. ဒါကငွေဖြစ်လွယ်ခြင်းမရှိစောင့်ဆိုင်းကြိမ်နှင့်အတူချက်ချင်းငွေပေးချေမှုအခြေချဖို့အသုံးပြုလိမ့်မည်, 24 နာရီတစ်ရက်နှင့် 365 ရက်ပေါင်းတစ်နှစ်.
ငွေသွင်းငွေထုတ်၏အစမှအဆုံးတိုင်အောင်အဆုံးမှအဆုံးသို့အပြောင်းအလဲနဲ့အချိန်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည် 10 စက္ကန့်ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်း. အဆိုပါစနစ်အားပြီးသားသုံးစွဲသူလိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းဖို့ထိထိရောက်ရောက်မှုအဆင့်အရပျ၌အစီအစဉ်များရှိပါတယ်.
"တကယ်ပါပဲ, ယူရိုဧရိယာထဲမှာ, ကွဲပြားခြားနားသောဥပဒေရေးရာမူဘောင်များနှင့်ဖောက်သည်အလေ့အထများနိုင်ရှိရာ, အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါနေသောအမျိုးသားရေးသို့မဟုတ်တံခါးပိတ်-ကွင်းဆက်ဖြေရှင်းချက်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမှပေါ်ပေါက်အသစ်ကအကွဲကွဲအပြားပြားတစ်အန္တရာယ်အမြဲရှိ. ဒီအန္တရာယ်ကိုတန်ပြန်ရန်, ဥရောပငွေပေးချေမှုစက်မှုလုပ်ငန်းယခုအမှန်တကယ်ဒယ်အိုး-ဥရောပလက်ငင်းငွေပေးချေအစီအစဉ်စတင်ခြင်းဖြစ်သည်။ "
ဒါကြောင့်ဥရောပတစ်ခုလုံးအနှံ့ reachability အောင်မြင်ရန်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုအကြံပြုချက်များနှစ်ခု features တွေရှိပါတယ်. ပဌမ, အကြံပြုချက်များအတွက် SEPA လက်ငင်းအကြွေးလွှဲပြောင်းအပေါ်အခြေခံသည် (SCT Inst) - ဒယ်အိုး-ဥရောပလက်ငင်းငွေပေးချေမှုများအတွက်အစီအစဉ်, ဥရောပတစ်လွှားငွေပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှုပေး၏ကြီးမားသောအရေအတွက်အားဖြင့်အသုံးပြုရရန်မျှော်လင့်. ဒုတိယ, အကြံပြုချက်များ TARGET2 တစ်ခု extension ကိုအဖြစ်တီထွင်ပါလိမ့်မည်, အရာထားပြီးဥရောပတစ်လွှားပါဝင်သူတစ်ဦးကယျြပွနျ့ကွန်ယက်ကိုရှိပါတယ်.
အဲဒါကိုဖြေရှင်းဘို့ယူရိုသုံးပါလိမ့်မယ်ပေမယ့်, ဒီအစဉ်အဆက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးသည်ကမ္ဘာ့ရည်မှတ်ယူရိုနည်းပညာဖွစျနိုငျကွောငျးအထင်ရှားဆုံးမှတ်တိုင်တစ်ဦးဖြစ်လိမ့်မည်. ဂယက်ထ blockchain များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုအတည်ပြုခံရဖို့သေးသောဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့် node များအတော်လေးကောင်းစွာကိုက်ညီ. (Seabreeze စမတ်ကဒ် Co. , Ltd မှ.)
prev: NFC ကိုငွေပေးချေမှုကိုထောကျပံ့, ချစ်ပ်များနှင့်တံဆိပ်ထုတ်လုပ်သူကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်
နောက်တစ်ခု: JCOP4 စီးရီး JAVA ကဒ်များကောင်းကျိုးများ (J2R110|J3R110|J2R150|J3R150|J3R180) အီလက်ထရောနစ် ID ကိုကတ်များ၏လယ်ပြင်တွင်